Fanirisoa Ernaivo : Tsy tokony ho Mpitsara intsony -
AccueilRaharaham-pirenenaFanirisoa Ernaivo : Tsy tokony ho Mpitsara intsony
20/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vao nanomboka nanao ireny fihetsika nampametra-panontaniana ny maro ireny ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Ernaivo dia efa nanambara ny teto amin’ny gazety fa misy ambadika politika, ary misy famatsiam-bola avy amin’ny fanoherana aorian’ity Mpitsara iray ity. Milaza miara-mahita isika ankehitriny fa dia isan’ny kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany, izany hoe, manana 250 Tapitrisa atao antoka ary manam-bola amina miliara anaovana propagandy…
Hifarana rahampitso 21 aogositra 2018 ny daty farany fanaterana ireo antontan-taratasy filatsahan-kofidiana eny anivon’ny HCC. Ny alarobia faha-8 aogositra lasa teo no nanatitra izany teny Ambohidahy ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Ernaivo, herinandro katroka taorian’ny nanateran’i Andry Rajoelina ny azy. Mazava be fa tetika hanaparitahana ny vatom-pifidianana amin’ny fihodinana voalohany no tanjona amin’izao filatsahan’ny filohan’ny SMM izao, tanjona somary mampihomehy ihany rehefa dinihina satria ho sarotra amin’ity Mpitsara ity ny hahazo isan-jato mihoatra ny 1%.
Ny zavatra azo antoka aloha dia tsy ho lany filoham-pirenena izany ny filohan’ny SMM, Fanirisoa Ernaivo ary tsy ho isan’ireo hahaverim-bola, izany hoe, hahazo isam-bato mihoatra ny 10%. Efa nambara teto ihany moa fa fanomezana vahana ny “tsimatimanota” izao filatsahany izao noho ireto antony roa ireto: Na azy manokana ny miliara hampiasainy amin’izao fifidianana izao dia tokony hitondra fanazavana mikasika ny fomba nahazoany izany vola be izany ny tenany. Na nahazo famatsiam-bola ny tenany dia tokony hanambara ny anaran’ireo olona nanome izany vola izany satria ho isan’ireo “tsimatimanota” eto amin’ny firenena aorian’ny fifidianana.
Noho izany indrindra no ilazana eto fa tsy tokony ho isan’ny ao anatin’ny Fianakaviamben’ny Mpitsara intsony ity filohan’ny SMM ity aorian’io fifidianana io, satria efa mazava izany fa manao politika tokoa ny tenany ary nataony fitaovana politika mihitsy izay maha filohan’ny Sendikan’ny Mpitsara azy izay. Tokony hampiseho izany fahamendrehana izany eo imason’ny vahoaka ny Fianakaviamben’ny Mpitsara sy ny tontolon’ny Fitsarana, izay noheverina hatramin’izay fa tsy mitanila amin’ny fanapahan-kevitra sy ny didim-pitsarana izay avoakany.